Academix GNU / Linux Project: iko kugoverwa kwekushandisa kwedzidzo | Linux Vakapindwa muropa
Academix GNU / Linux Project: iko kugoverwa kwekushandisa kwekudzidza kwaunofanira kuziva
Academix GNU / Linux iko kugovera kunobva paDebian GNU / Linux, uye kwakagadziridzwa na nharaunda kuisa kukoshesa kudzidzisa. Naizvozvo, pane hwaro hwakasimba hunopihwa nharaunda yeDebian, vagadziri vayo vakawedzera kuwanda kwezvirongwa zvepachena zvedzidzo. Iyi didactic software, inoumbwa nemapakeji anopfuura zana nemakumi mana, yakanangana nematanho akasiyana ezvidzidzo, zvese zvemakosi kubva kupuraimari kusvika kusekondari kana dzidzo yepamusoro.
Kuwedzera kune iine mapakeji ayo anogona batsira vadzidzisi uye shandira vadzidzi, vagadziri vayo vanoda kuti zviitire nyore iwe, ine dhizaini yekumisikidza iyo iwe yaunogona kuisa iyo yakazara pack yezvirongwa nekamwechete mbeva kubaya, pakati pawo paunowana maapplication kubva kumapoka akasiyana senge masvomhu, fizikisi, kemesitiri, jogirafi, biology, manhamba, zvemagetsi, kudhirowa, hofisi otomatiki, mumhanzi, zvirongwa, odhiyo uye vhidhiyo kugadzirisa. Saizvozvowo, kugovera kunoshandurwa mumitauro yakati wandei seSpanish, Chirungu, ChiItaly, ChiFrench neRomania, kuitira kuti pasave nezvinodzivirira mutauro.
Kana zvese izvi zvichiratidzika kunge zvinokwezva kwauri, kune zvekare zvimwe zvekuwedzera zvakaita seanopindirana marabhoritari, a chikamu chakakosha nokuti vadzidzisi izvo zvinovatendera kuti vagadzire akawanda maposti evadzidzi vavo, nezvimwe Pakati pezvinhu izvi zvese iwe unowana ese ari maviri mapurogiramu aunogona kuwana mune mamwe ma distros, kunyanya pakati peDebian repositori, uyezve imwezve software inoshandiswa mumayunivhesiti ane mbiri muUS neEurope.
Yayo desktop desktop inotendera iwe shanda intuitively uye magirafu achishandisa desktop yemazuva ano uye ine yakaderera kushandisa zviwanikwa, saka inogona kushanda pamakomputa ane mashoma simba Hardware kana ekare makomputa. Izvi zvinoitawo kuti zvikwanise kuchinjika nharaunda dzedzidzo dzisina bhajeti dzakakwirira kana michina yemhando yepamusoro, kugona kuve nemidziyo imwechete zvisinei nebhajeti. Uye zvechokwadi, iyo software yakasanganiswa, iri pasi peGPL kana BSD rezinesi, haina mari semuridzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Academix GNU / Linux Project: iko kugoverwa kwekushandisa kwekudzidza kwaunofanira kuziva
Luta dumitru akadaro
Ndatenda zvikuru nechinyorwa! Munguva pfupi isu tine iyo AcademiX 2.0 yakavakirwa paDebian Buster, iine zvakawanda zvimwe zvikumbiro zvevadzidzi nevadzidzi, zvakare maturusi ehurongwa, hofisi nezvimwe.
Pindura kuna Luta Dumitru
Slimbook inogadzira desktop yayo renji neKymera